Cali guudlaawe oo amray in lasoo qabto dadkii ka dambeyay dilkii Taliyaha booliiska Hiiraan – XAMAR POST
Kusimaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa Ciidamada ammaanka faray in ay soo qabtaan dadkii ka dambeeyay dilka Taliyihii qaybta Booliska Gobolka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Mocow, oo lagu dilay iska hor imaad ka dhacay duleedka Baladweyne.
Madaxweyne ku xigeenka Hir-Shabeelle ayaa sheegay in aan la aqbali karin shaqaaqadii ka dhacday Gobolka Hiiraan in aan isla xisaabtan laga sameyn.
Cali Guudlaawe ayaa rajo ka muujiyay in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay iska hor imaadkii ka dhacay Deegaanka Kala-beer ee Duleedka Magaalada Baladweyne.
Gudoomiyihii xil ka qaadista lagu sameeyay ee Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Daba-geed ayaa kahor yimid xil ka qaadis Jimcihii uu ku sameeyay Madaxweyne Waare.
Waxaana Bartamihii todobaadkaan uu Warbaahinta u sheegay in Madaxweyne ku xigeenka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuuse uu ciidamo u diray si ay usoo qabtaan, inkasta oo uusan ka hadlin Madaxweyne Guudlaawe.
Maamulka Hir-Shabeelle waxa uu maamulaa Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana Hiiraan soo maray xubno kala duwan kuwaas oo ku yimid magacaabis dhowrkii bilood uu sameeyo Wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle.